ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးထုတ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
နံပါတ် ၄ အချက်က အသက်ပဲ!!!
နှင်းကြားဖူးနေကျစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ပစ္စည်းတွေကို ပရိုမိုးရှင်းချတယ်ဆိုရင် တကယ့်ကောင်းပေ့ဆိုတာမျိုးတွေပဲချတာ၊ ဒီမှာချရင်တော့ ပစ္စည်းအစုတ်တွေပဲရတယ် ဂျင်းတွေပါဟယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အမှန်တော့ ဒီလိုရယ်။ ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာက ပုံမှန်ထက်တော့ ဈေးကအများကြီး လျော့နေတာမို့ အခုမှအသစ်ထွက်ထားတဲ့ New Arrival တွေကိုတော့ ဒီလိုဈေးနဲ့ဘယ်ရနိုင်ပါ့မလဲနော်။ (ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့အေ။) ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလျှော့ဈေးထဲကပဲ တကယ့်အကောင်းဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လို ရှာကြမလဲ? (ဒီစာကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေမမြင်ပါစေနဲ့ :P)
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ပေါက်ကရတွေ မတွေးကြနဲ့ဦးနော်။ ဒါကတော့ အင်္ကျီရယ်မှမဟုတ်ဘူး ဘယ်ပစ္စည်းဝယ်ဝယ်နှင်းသုံးနေကျနည်းလမ်း။ အမြဲတမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကို အရှေ့မှာထားတတ်ပြီး အသစ်တွေကို အနောက်မှာထားတတ်တဲ့ သဘောတစ်ခုရှိတယ်ရယ်။ အဲ့တော့ သိပ်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ပြီးမှ အကောင်းတွေကိုရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲလေ။ ဆိုတော့ အင်္ကျီတွေ တခြား Cosmetic ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်း အကောင်းကို အောက်တို့၊ အနောက်တို့မှာ ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေချာမျက်စိကို ရှင်ရှင်ထားပြီး အနောက်ဘက်တွေ၊ အောက်ဆုံးတွေအထိနှိုက်ပါလို့။
Related Article >>> အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တက်သစ်စ Beauty Blogger (၅) ဦး
အလောသုံးဆယ် သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းတွေကို သွားရွေးဖို့စိတ်တောင်မကူးပါနဲ့လို့။ အချိန်သေချာပေးပြီး တစ်ခုချင်းစီကို အပြစ်အနာအဆာရှိမရှိရွေး၊ အကယ်၍ လူအရမ်းမများဘူးဆိုရင် ကိုယ်နဲ့လိုက်မလိုက် ဝတ်ကြည့်တာမျိုးတွေပါ လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ပရိုမိုးရှင်းရတဲ့ပစ္စည်းဝယ်တာတောင် ပုံမှန်ဝယ်ရသလိုပဲ အဆင်ပြေနေစေမှာပါနော်။
(၃) ကိုယ်ဝယ်မယ့်ဘရန်းအကြောင်း အရင်လေ့လာထားပါ။
80% ပရိုမိုးရှင်းဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်ကြီးမြင်လို့ ဆိုင်ထဲပြေးဝင်သွားတာထက် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တတ်တဲ့ရာသီမျိုးမှာ Facebook ပေါ်မှာတက်ရှာပြီး ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ဘရန်းအကြောင်းကို ကြိုပြီးလေ့လာထားပါ။ သာမန်ပစ္စည်းထဲမှာတောင် မကောင်းတဲ့ကောမန့်တွေ၊ ကွန်ပလိန်းတွေများနေရင်တော့ ဒီဘရန်းကိုမီးနီပြပြီး ရှောင်သင့်ပါပြီ။
Related Article >>> သံလွင်နဲ့ အုန်းဆီမှာ ဘယ်ဆီက ပိုကောင်းလဲ
(၄) ကိုယ်ဘာဝယ်ချင်လဲဆိုတာ သေချာသိပါစေ။
ဒါကတော့ နှင်းကိုယ်နှင်းလည်း သတိပေးတာပေါ့နော်။ ပရိုမိုးရှင်းဆိုတဲ့ သဘောအတိုင်း ဆိုင်တွေကတော့ ရှိရှိသမျှပစ္စည်းအားလုံးကို လိုချင်စရာဖြစ်အောင် စီထားမှာပဲ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ကဘာလိုချင်မှန်းမသိ၊ လှတာမှန်သမျှ ဆွဲထည့်မယ်လို့ တွေးထားရင်တော့ ဂျင်းမိခြင်းအပေါင်း သရဖူဆောင်းရလိမ့်မယ်လို့။ ဒါကြောင့် မသွားခင်မှာ ကိုယ်ဘာဝယ်ချင်လဲ၊ ဘာပစ္စည်းလိုချင်လဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှ သွားပါနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဂျင်းမိဖို့ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီ ၄ ချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေပါပေါင်းထည့်ပြီး ရေးထားတာမို့ ယောင်းတို့အတွက်လည်း အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ ဆိုင်ရှင်တွေကို ဂျင်းပြန်ထည့်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းဝယ်တိုင်း အပြုံးပန်းလေးတွေကို ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း… ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
နံပါတျ ၄ အခကျြက အသကျပဲ!!!
နှငျးကွားဖူးနကေစြကားတဈခှနျးရှိတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ ပစ်စညျးတှကေို ပရိုမိုးရှငျးခတြယျဆိုရငျ တကယျ့ကောငျးပဆေို့တာမြိုးတှပေဲခတြာ၊ ဒီမှာခရြငျတော့ ပစ်စညျးအစုတျတှပေဲရတယျ ဂငျြးတှပေါဟယျ ဆိုတာမြိုးပေါ့။ အမှနျတော့ ဒီလိုရယျ။ ပရိုမိုးရှငျးဆိုတာက ပုံမှနျထကျတော့ ဈေးကအမြားကွီး လြော့နတောမို့ အခုမှအသဈထှကျထားတဲ့ New Arrival တှကေိုတော့ ဒီလိုဈေးနဲ့ဘယျရနိုငျပါ့မလဲနျော။ (ပစ်စညျးမိတျဆကျပှဲဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့အေ။) ဒါပမေဲ့ ဒီလိုလြှော့ဈေးထဲကပဲ တကယျ့အကောငျးဆိုတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရှာဝယျလို့ရပါတယျ။ ဘယျလို ရှာကွမလဲ? (ဒီစာကို ဆိုငျပိုငျရှငျတှမေမွငျပါစနေဲ့ :P)
ခေါငျးစဉျကွညျ့ပွီး ပေါကျကရတှေ မတှေးကွနဲ့ဦးနျော။ ဒါကတော့ အင်ျကြီရယျမှမဟုတျဘူး ဘယျပစ်စညျးဝယျဝယျနှငျးသုံးနကေနြညျးလမျး။ အမွဲတမျးဆိုငျပိုငျရှငျတှကေ ပစ်စညျးအဟောငျးတှကေို အရှမှေ့ာထားတတျပွီး အသဈတှကေို အနောကျမှာထားတတျတဲ့ သဘောတဈခုရှိတယျရယျ။ အဲ့တော့ သိပျမကောငျးတဲ့ပစ်စညျးတှရေောငျးထှကျပွီးမှ အကောငျးတှကေိုရောငျးတယျဆိုတဲ့ သဘောပဲလေ။ ဆိုတော့ အင်ျကြီတှေ တခွား Cosmetic ပစ်စညျးတှဆေိုရငျလညျး အကောငျးကို အောကျတို့၊ အနောကျတို့မှာ ထားတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သခြောမကျြစိကို ရှငျရှငျထားပွီး အနောကျဘကျတှေ၊ အောကျဆုံးတှအေထိနှိုကျပါလို့။
Related Article >>> အကျဒျမငျအကွိုကျဆုံး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တကျသဈစ Beauty Blogger (၅) ဦး
အလောသုံးဆယျ သှားရမယျဆိုရငျတော့ ဒီပရိုမိုးရှငျးပစ်စညျးတှကေို သှားရှေးဖို့စိတျတောငျမကူးပါနဲ့လို့။ အခြိနျသခြောပေးပွီး တဈခုခငျြးစီကို အပွဈအနာအဆာရှိမရှိရှေး၊ အကယျ၍ လူအရမျးမမြားဘူးဆိုရငျ ကိုယျနဲ့လိုကျမလိုကျ ဝတျကွညျ့တာမြိုးတှပေါ လုပျပေးပါ။ ဒါဆိုရငျ ပရိုမိုးရှငျးရတဲ့ပစ်စညျးဝယျတာတောငျ ပုံမှနျဝယျရသလိုပဲ အဆငျပွနေစေမှောပါနျော။
(၃) ကိုယျဝယျမယျ့ဘရနျးအကွောငျး အရငျလလေ့ာထားပါ။
80% ပရိုမိုးရှငျးဆိုတဲ့ ဆိုငျးပုဒျကွီးမွငျလို့ ဆိုငျထဲပွေးဝငျသှားတာထကျ ပရိုမိုးရှငျးလုပျတတျတဲ့ရာသီမြိုးမှာ Facebook ပျေါမှာတကျရှာပွီး ကိုယျဝယျခငျြတဲ့ဘရနျးအကွောငျးကို ကွိုပွီးလလေ့ာထားပါ။ သာမနျပစ်စညျးထဲမှာတောငျ မကောငျးတဲ့ကောမနျ့တှေ၊ ကှနျပလိနျးတှမြေားနရေငျတော့ ဒီဘရနျးကိုမီးနီပွပွီး ရှောငျသငျ့ပါပွီ။
Related Article >>> သံလှငျနဲ့ အုနျးဆီမှာ ဘယျဆီက ပိုကောငျးလဲ
(၄) ကိုယျဘာဝယျခငျြလဲဆိုတာ သခြောသိပါစေ။
ဒါကတော့ နှငျးကိုယျနှငျးလညျး သတိပေးတာပေါ့နျော။ ပရိုမိုးရှငျးဆိုတဲ့ သဘောအတိုငျး ဆိုငျတှကေတော့ ရှိရှိသမြှပစ်စညျးအားလုံးကို လိုခငျြစရာဖွဈအောငျ စီထားမှာပဲ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယျကဘာလိုခငျြမှနျးမသိ၊ လှတာမှနျသမြှ ဆှဲထညျ့မယျလို့ တှေးထားရငျတော့ ဂငျြးမိခွငျးအပေါငျး သရဖူဆောငျးရလိမျ့မယျလို့။ ဒါကွောငျ့ မသှားခငျမှာ ကိုယျဘာဝယျခငျြလဲ၊ ဘာပစ်စညျးလိုခငျြလဲဆိုတာကို သခြောစဉျးစားပွီးမှ သှားပါနျော။ ဒါဆိုရငျတော့ ဂငျြးမိဖို့ရာခိုငျနှုနျးနညျးသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒီ ၄ ခကျြကတော့ ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံတှပေါပေါငျးထညျ့ပွီး ရေးထားတာမို့ ယောငျးတို့အတှကျလညျး အသုံးဝငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျနျော။ ဆိုငျရှငျတှကေို ဂငျြးပွနျထညျ့ပွီး ပရိုမိုးရှငျးပစ်စညျးဝယျတိုငျး အပွုံးပနျးလေးတှကေို ဆငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး… ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဒီနရောမှာပဲ ရပျလိုကျပါတယျရှငျ။
Tags: best, Choice, items, promotional, tips, tricks